Boggageyga (Mina sidor) - Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
Hem / Boggageyga (Mina sidor)
Ee Boggageyga (Mina sidor), waxaad ka dabagali kartaa dhammaan dacwadaha halka aad ku muujiysay xiisaha. Waxaa sidoo kale jiro warbixin halkaan ee ku saabsan waqtigaaga liiska, iyo liiska qidmadaada. Ee Boggageyga (Mina sidor), waxaad sidoo kale cusbooneysiin kartaa warbixintaada gaarka ah. Si aad u gashid Boggageyga (Mina sidor), waxaad kowdii u baahantahay inaad gashid.
Qaabka ugu sahlan ee ugu bad qabsan ee loo galo waa isticmaalida Aqoonsiga Bangiga (Bank-ID). Haddii aadan laheyn gelitaanka Aqoonsiga Bangiga (Bank-ID), waxaad aasaasan kartaa akoonka si aad ugu gashid ciwaanka i-meelka iyo furaha.
Hadalka xiiseynta iyo meesha liiska
Ee Boggageyga (Mina sidor), waad raaci kartaa oo aad qaabili kartaa hadaladaada ee xiiseynta. Daganaansho walba, waad arki kartaa waxa meeshaada hadeer ee liiska uu ka ka mid yahay kuwa muujiyay xiiseynta. Haddiiba daganaanshaha la xayeysiiyay, hadalo badan ee xiiseynta waa lagu dari karaa. tani sidoo kale waxay la micna tahay in meeshaada ree liiska ay hordhac u tahay, iyo isbadelo guul ah.
Haddii aad tahay mid ka mid ah kuwa leh waqtiga liiska dheer ee ka mid ah kuwa muujiyay xiiseynta daganaanshaha, waxaan kuu soo direynaa casuumaada eegida. Dhammaan warbixinta ku saabsan eegida waxaa laga heli karaa Boggageyga (Mina sidor). Eegida kadib, waxaad u baahaneysaa inaad xareysid jawaabta sida haddii aad weli xiiseyneysid daganaanshaha. Waad xareyn kartaa jawaabta ee Boggageyga (Mina sidor).
Waxaad cusbooneysiineysaa daqligaaga- iyo warbixinta xiriirka ee nafsadaada. Sidoo kale hubi inaan kuu hayno labadaba ciwaanka i-meelka iyo lambarka taleefonka adiga, si markaas aan si dhaqso ah kuula soo xiriirno tusaale ahaan. eegida ama casuumaada, ama iyo warbixinta kale ee muhiimka ah.
Waqtiga liiska iyo qidmada liiska
Bogga bilowga ee Mina sidor , waxaad ku arkeysaa waqtigaaga liiska - tusaale ahaan, intee ayaad ku jirtay liiska ee daganaanshaha. Waxaad sidoo kale arkeysaa haddii qidmada liiskaaga la bixiyay, iyo goorta ogeysiinta liiska ugu dambeeyay la soo diray.
Codsadayasha isla nooshihiin
Waad ku dari kartaa codsadaha isla nooshihiin. Codsadaha isla shaqeysaan waa qofka aad rabtid inaad la noolaatid. faa'idada lagu darayo codsadaha isla nooshihiin waa mida qaar ka mid milkiilayaasha way ogolaanayaan inay wada xisaabiyaan daqliyadaada. Xaaladaha daqliga, qofka isla shaqeysaan sidoo kale waalagu dari karaa heshiiska.